एकाबिहानै बर्दिबासमा ड' रलाग्दो प्रहरीको गो 'ली लागेर १ जनाको मृ' त्यु, लखेटीलखेटी टाउकोमा गो' ली !! - Public 24Khabar
Home News एकाबिहानै बर्दिबासमा ड’ रलाग्दो प्रहरीको गो ‘ली लागेर १ जनाको मृ’ त्यु,...
एकाबिहानै बर्दिबासमा ड’ रलाग्दो प्रहरीको गो ‘ली लागेर १ जनाको मृ’ त्यु, लखेटीलखेटी टाउकोमा गो’ ली !!
एकाबिहानै बर्दिबासमा ड’रलाग्दो प्रहरीको गो**ली लागेर १ जनाको मृ**त्यु, लखेटीलखेटी टाउकोमा गो**ली !!
काठमाडौं । प्रहरीले नक्कली नोटको का’रोबार गरेको अभियोगमा बिहिवार एक जनलाई प’क्राउ गरि सार्वजनिक गर्‍यो।चितवनको इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराको टोलीले मकवानपुर राक्सीराङ् ८ बस्ने २६ बर्षीय जीतबहादुर लोप्चनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।प्रहरीले एक हजार दरका ३ सय २१ थान नक्कली नोट समेत बरामद गरेको थियो। उनले नक्कली नोट खाजा पसल देखि अन्य ठाउँमा दिएको खुलेको थियो।
पछिल्ला दशैंको ट्रेन हेर्ने हो भने नक्कली नोट कारोबारीहरु यो समयमा बढी सक्रिय हुने गरेका छन्। आर्थिक का’रोबारबढी हुने भएकाले का’रोबारीहरु संक्रिय हुने गरेको प्रहरीको दावी रहेको छ।यस्ता कारोबारीले दिएको नक्कली नोट तपाइको गोजीसम्म पनि आइपुग्न सक्छ। त्यसैले नोटको कारोबार गर्दा एकदमै सचेत हुनुहोला। नेता थापाले प्रधानमन्त्रीले गैर९राजनीतिक र विशुद्ध गुप्तचरसँग गरेको भेटमाथि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् थापाले शुक्रबार यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।यो भेटलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शिष्टाचार भेट भनेकोप्रतिसमेत थापाले आपत्ति जनाएका छन्। गुप्तचरसँग शिष्टाचार भेट भन्नु हास्यास्पद भएको उनको भनाइ छ। उनले लडाईंको समयमा बाहेक विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वको भेटलाई सामान्य मान्न नसकिने बताएका छन्।
यो पनि: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीबाटै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा ‘थ्रे’ट’ देखिएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा लामो स्टाटस लेख्दै यस्तो बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालको सुरक्षा निकायको अनुपस्थितिमा विदेशी गुप्तचरलाई भेटेको विषयलाई लिएर नेता थापाको यस्तो प्रतिकृया आएको हो । उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो कृयाकलापले कूटनीतिक मर्यादा मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
नेता थापाले प्रधानमन्त्रीले गैर९राजनीतिक र विशुद्ध गुप्तचरसँग गरेको भेटमाथि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् थापाले शुक्रबार यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।यो भेटलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शिष्टाचार भेट भनेकोप्रतिसमेत थापाले आपत्ति जनाएका छन्। गुप्तचरसँग शिष्टाचार भेट भन्नु हास्यास्पद भएको उनको भनाइ छ। उनले लडाईंको समयमा बाहेक विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वको भेटलाई सामान्य मान्न नसकिने बताएका छन्।
Previous articleभर्खरै सकियो लकडाउन बारे निर्णय गर्न बसेको सीसीएमसीको बैठक, गर्यो यस्तो निर्णय ( जानकारीका लागि सेयर गराै)
Next articleश्रीमानले श्रीम”तीलाई खुकु’रीले २ टुक्रा पारे, ठाउँको ठाउँमै सि ध्याए, झापामा हेर्नुस्